धेरै दुधदिने पाकिस्तानी भैंसीको रे'कर्ड तो'डेर बिश्व रे'कर्ड राख्ने भारतिय भैंसी ५१ लाखमा बिक्री ! - Filmy News Portal Of Nepal
धेरै दुधदिने पाकिस्तानी भैंसीको रे’कर्ड तो’डेर बिश्व रे’कर्ड राख्ने भारतिय भैंसी ५१ लाखमा बिक्री !
भारतको हरियाणास्थित मुर्राह नस्लकी धेरै दूध दिएर विश्व रेकर्ड बनाउने वाली सरस्वती भैँसी ८१ लाखमा बि’क्री भएको छ । हरियाणको हिसार जिल्लका किसान सुखबीर सिंह ढान्डाको घरमा रहेको उक्त भैँसी ३३.१३१ किलोग्राम दूध दिएर पाकिस्तानी भैँसीले बनाएको विश्व रे’कर्ड तो’डेको थियो ।
सरस्वतीलाई लुधियानाका पवित्र सिंहले किनेका थिए । सुखवीरलाई सरस्वती चो’री हुने ड’र भएकोले बे’चेको भारतीय सञ्चारमाध्यामले बताएका छन् । १ करोडमा पनि बे’च्ने मन न’भएको बताउँदै उनले चो’री कै ड’रले गर्दा बे’च्नु परेको बताएका हुन् । विश्व रे’कर्ड बनाउँदा सरस्वतीलाई ३ लाख २० हजार दिएर सम्मानित गरिएको थियो ।
यो भन्दा अगाडि पाकिस्तानी भैँसीले ३२.०५० किलोग्राम दूध दिएर विश्व रे’कर्ड बनाएको थियो । भैँसी बे’च्नु अगाडि बिभिन्न प्रान्तका किसानरुलाई उपस्थित गराइएको थियो । सम्मेलनमा ७०० जना किसान उपस्थित थिए । – एजेन्सी ।